Hiran State - News: HS:-R/wasaaraha Somalioya oo la taliyaha dhianca amaanka u maagcaabay Amb Xooshow
HS:-R/wasaaraha Somalioya oo la taliyaha dhianca amaanka u maagcaabay Amb Xooshow
HS:-R/wasaaraha Xukumada federalka Somaliya H.E. Cumar Cabdirashiid Cali Shar'marke oo la taliyahiisa dhianca amaanka xafiiska r/wasaaraha u magacaabay Amb Abdulqadir Abdulle Hooshow
Amb Xooshow oo horey uga soo noqday dowladii Ala ha u naxariistee marxuum Cabdulaahi Yusuf Ahmed Safiir ayaa waxaa xilkaan mar kale u magacaabay R/wasaaraha xukumada federalka Soomaliya Omar Abdirashiid oo dhawaan noqday markii labaad ee isku xigta r/wasaaraha Soomaaliya.
R/wasaare Cumar waxuu ka soo jeedaa qoys mudo ku soo jiray siyaasada dalka waxaana xilkaan uga horeeyey Ala ha u naxariistee abahii C/rashiid Cali Shar'marke oo isagu si lama filaan ah ugu geeriyooday magaalada Laascaanood xili dalka aad looga jeclaa.
Hadaanse u soo laabano masuulkaan loo magacaabay xilka lataliyaha dhinaca amaanka ee xafiiska r/wasaaraha Somaliya ( Security Advisor) Amb Xooshow waxey ku sifeeyeen dadka yaqaano nin howlkar ah oo daacad ah umada Soomaaliyeedna ay iskugu mid tahay balanta ku wanaagsan waana nin ka soo dhalaali kara xilkaan qaran hadii uu sidegan ula jaanqaado siyaasadaha qariban ee dalka ka jiray waayadii danbe.
Hadaba halkaan hoose ka dheeho wareegtadii lagu magacaabay masuulkaan.
· admin on May 03 2015 19:37:36 · 0 Comments · 2670 Reads ·
14,905,532 unique visits